Chocolate Sugar Enrobing Decorating Machine Sprink Factory, Chocolate Sugar Enrobing Decolate sprinkling Machine Supplier - LST Machine
Gịnị bụ Chocolate Sugar Enrobing ịchọ mma sprinkling Machines?
1) Enrobing bụ ụzọ dị mfe isi mee ngwaahịa chocolate.
2) Chocolate ịchọ mma igwe bụ tumadi icho mma chocolate mgbe chocolate enrobing.
3) Igwe na-efesa ọka ọka: Wụsa mkpụrụ osisi ndị a gbajiri agbaji, sesame na obere ihe ndị ọzọ dị n'elu ngwaahịa chocolate. A na-etinye igwe a n'etiti igwe mkpuchi na oghere dị jụụ, nkwụsịtụ na-agbanwe agbanwe na mgbakọ, dị mfe ịkwaga.
Kedu ihe a na-eji igwe na-efesa ihe ịchọ mma Chocolate Sugar?
1:Enrobing igwe ejirila ọtụtụ ihe kpuchie chocolate (enrobe chocolate paste n'elu) na nri dị iche iche dị ka bisikiiti, wafers, akwa akwa, achịcha achicha na nri nri wdg. Enwere ike ịme ya maka mkpuchi chocolate zuru oke ma ọ bụ ọkara dịka achọrọ. .
2: Chocolate decorating igwe bụ ụdị chocolate igwe eji decorating elu nke bisikiiti na chocolate na patterns.And a nso nke ụkpụrụ bụ nhọrọ dị ka onye ahịa chọrọ.Site ya moto, igwe na-akpali na longitudinal na transverse ntụziaka nke na-akpali. A na-ewepụ pasta chocolate na tube nke na-akpụ akpụ ma na-agbanye ya site na mgbapụta, na n'elu chocolate ma ọ bụ bisikiiti nke a na-etinye na nchara ígwè a na-eji ihe a chọrọ mma chọọ ya mma. , enwere ike ịmepụta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụdị dị iche iche.
3: Wụsa mkpụrụ akụ, sesame na ihe ndị ọzọ dị ntakịrị n'elu ngwaahịa chọkọleti.Mgbe ịsachara ngwa ahụ na akpaghị aka, a na-ewepụ ihe ọka ahụ ngafe site na ịma jijiji iji mechaa mkpụzi ihe nke ngwaahịa ahụ.
Igwe mkpuchi Drum Chocolate/Sugar Rotary
Chocolate caramel enrobing igwe
Igwe na-efesa ọka